Madaxweyne Farmaajo oo aqalka sare ugu baaqay ansixinta hindise-sharciyeedka naafada qaranka - Halbeeg News
Madaxweyne Farmaajo oo aqalka sare ugu baaqay ansixinta hindise-sharciyeedka naafada qaranka
MUQDISHO(HALBEEG)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay maalinta caalamiga ah ee Naafada Adduunka ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogga saareyso u adeegidda dadka naafada ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay masuuliyadda gaarka ah iyo midda wadareed ee ku aaddan dadka naafada ah si ay u helaan adeegyada asaasiga u ah iyo xuquuq dhammeystiran.
Madaxweynaha ayaa Aqalka Sare ugu baaqay in ay dadejiyaan ansixinta Sharciga dhismaha Hay’adda Naafada Qaranka, taas oo aasaas u ah mideynta iyo dar dargelinta dadaallada iyo qorsheyaasha lagu kaabayo nolasha dadka naafada ah.
Madaxweyne Faraamjo ayaa tilmaamay in falalka arxan darrada ah ay Al-ururka shabaab ku bartilmaamsadeen shacabka Soomaaliyeed ay kordhisay tirada dadka naafada ah, isagoona sheegay in shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ay gacanna kula dagaalamayaan cadawgaas, gacanta kalena ay ku dhisayaan dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay is caawiyaan, si gaar ahna u garab istaagaan dadka Naafada ah.
AMISOM oo saldhig cusub ku wareejisay maamulka Jubbaland
Shirka banbax sanadeedka wasaaradda arrimaha dastuurka oo la soo xiray